कोरोना भाइरसबाट सचेत रहन आग्रह - Samadhan News
कोरोना भाइरसबाट सचेत रहन आग्रह
समाधान संवाददाता २०७६ माघ १२ गते १२:०९
नेपालमा कोरोना जिवाणु (भाइरस) भित्रिन सक्ने जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले कोरोना भाइरस सरुवा भएकाले सतर्क हुन सबैलाई आग्रह गरे ।
चीनबाट नेपाल फर्किएका १ विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ । भाइरस संक्रमित बिरामी आउनसक्ने स्थानमा तयारी र सतर्कता अपनाइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कको क्षमता बढाएर उपयुक्त जनशक्ति र उपकरणसहित नेपाल भित्रने शंकास्पद बिरामीको निगरानी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौंमा शनिबार उनले भने, ‘कोरोना भाइरस अध्ययनको विषय बनेको छ, तर धेरै भयावह स्थिति छैन ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले चीनमा कोरोना भइरसबाट संक्रमण भएकामध्ये ३ देखि ४ प्रतिशतको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरुवा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले कोरोना भाइरस जनावरबाट सर्ने भएकाले मासु खाँदा राम्रोसँग पकाएर खान सुझाव दिए । उनले भने, ‘कोरोना भाइरस आफैंमा नयाँ रोग होइन, यसपटकको भाइरस नयाँ प्रजातिको हो ।’